साधारण। लाभ र ट्रपिकल फल खतराबाट
साधारण - फल एक मिठाई र नाजुक स्वाद र एक अविश्वसनीय सुखद सुगन्ध छ। यो फल लामो धन, विश्वसनीयता र fruitfulness को प्रतीक भएको छ। तर यो को विशिष्टताको को साधारण स्वास्थ्य र सौन्दर्य कायम राख्न एक व्यक्ति मदत गर्न सक्छ कि धेरै उपयोगी विशेषताहरु जोडती पनि छ। यसलाई व्यापक बिउ निकाले विशेष तेल मा, beauticians प्रयोग गरिन्छ। साधारण आश्चर्य राम्रो खाना को पनि connoisseurs एक पकवान।
कि साधारण को भाग हो
फल साधारण एक हट जलवायु संग पूर्वी देशका आए। आकार मा गोलो, तर रंग विविधता र पाकेको आधारमा भिन्न हुन सक्छन्। फल लुगदी सामान्यतया पहेंलो वा सुन्तले छ। फाइबर को एक अधिकता को संरचना अनुसार हुन्छन्।
को साधारण धेरै भिटामिन, मानव जीव macro- लागि आवश्यक समावेश गर्दछ र तत्व, खनिज, र फाइबर र जैविक एसिड पहिल्याउन। यो साधारण फल प्रयोग कारण हो।
Microelements भ्रूण को भाग हो - फलाम, तामा, जस्ता, सेलेनियम र मैंगनीज छ। को macronutrients बीच पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम, सोडियम र फस्फोरस भनिन्छ गर्नुपर्छ। ती सबै मानव शरीर को सामान्य कामकाज सुनिश्चित गर्न आवश्यक छन्।
हानि र साधारण को लाभ फल को संरचना सिधै निर्भर छन्। यसलाई निम्न भिटामिन समावेश छन्:
provitamin एक, क्यान्सर विरुद्ध सुरक्षा मा मद्दत गर्छ जो को बारे 0.4 मिलीग्राम;
मानव स्मृति र पाचन असर जो भिटामिन बी 1, को 0.06 मिलीग्राम;
साथै सामान्य मा भिटामिन को अवशोषण महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जो, प्रतिरक्षा सुधार रूपमा 0.16 मिलीग्राम भिटामिन B5,;
0.13 मिलीग्राम भिटामिन B6 - रक्त शर्करा मधुमेह र स्नायु प्रणाली को रोगहरु लागि महत्त्वपूर्ण lowering;
14 मिलीग्राम भिटामिन B9, सुत्न, norepinephrine संश्लेषण को खर्च मा आनन्द को घटना भावना को सुधार को लागि आवश्यक;
भिटामिन सी को 28 मिलीग्राम - यो घाउ निको र हर्मोन को संश्लेषण मा सक्रिय भाग लिन्छ जसले थियो।
फल उपयोगी गुणहरू
तपाईं प्रायः खाना प्रयोग यदि खतराबाट र साधारण फल लाभ सजग हुनुपर्छ। रोग बाट पीडित मान्छे, वा अन्यथा, उत्पादन सिफारिस वा प्रयोगको लागि निषेधित हुन सक्छ।
कारण फल फाइबर मा उपस्थिति गर्न मल र प्रोटिन Assimilation पत्र मदत गर्नेछ।
यो रक्तअल्पता लागि सिफारिस गरिएको छ, रगतमा हेमोग्लोबिन को स्तर बढ्छ।
यो छाला टोन परिणामस्वरूप, तनाव, थकान, "frayed" नसाहरू संग मद्दत गर्छ र शरीरको उज्ज्वल सुन्तला रंग गर्न भाग धन्यवाद मा मुड सुधार गर्छ।
प्रतिरक्षा प्रणाली सकारात्मक प्रभाव। तपाईं सर्दी र रोकथाम महामारी समयमा लागि यो लाग्न सक्छ।
यो आकार मा प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ। सीधा प्रयोग र हानि साधारण क्यालोरी सम्बन्धित प्रति 100 ग्राम 65 किलो कैलोरी। तदनुसार, एक फल छैन 150 भन्दा बढी किलो कैलोरी। उत्पादन सबै वजन इच्छा छैन आफूलाई मीठो गर्न सीमित प्रयोग गरिन्छ किनभने यो, एकदम बिट छ।
भ्रूण गर्न हानि को एक बिट
यो साधारण को लाभ र खतराबारे सम्झना हुनुपर्छ। कुनै पनि उत्पादन केही विभाग को मान्छे को लागि contraindications, हुन सक्छ खाना प्रयोग गर्दा केही सीमितता छ।
मात्र पाकेको फल खान गर्नुपर्छ। को नपाकेको फल पेट र intestines रीस उठाउनु भनेर पदार्थ समावेश गर्दछ। त्यसैले जठरांत्रिय रोगहरु संग साधारण मान्छे खान खतरनाक। राम्रो फल विशिष्ट विशेषताहरु - उच्चारण स्वाद र दृढता गर्दा थिचिएको।
उत्पादन allergen छ। तपाईं दाना, राता अनुभव भने, सुनिंनु चिकित्सा सल्लाह खोज्नुपर्छ र साधारण नत्याग्ने एलर्जी को कारण निर्धारण गर्न। व्यक्तिगत घृणाको।
यो रक्सी संग संयोजन मा साधारण खान निषेध गरिएको छ।
कब्जियत र पेट समस्या जोगिन गर्न फल दुरुपयोग छैन। केही अवस्थामा, यो शरीर तापमान उठाउनु सक्छ।
लाभ र सुकेको साधारण को हानि
फल को सुकेको फारममा व्यापक मिठाईहरू, प्रकाश सलाद लागि खाना पकाउन प्रयोग गरिएको छ। यसलाई नास्ता अनाज र अनाज सट्टा चिनी गर्न थप गर्न सकिन्छ।
उत्पादन, निद्रामा सुधार मुड सुधार गर्न प्रयोग मस्तिष्क सक्रिय गर्न मद्दत गर्छ। यसबाहेक, यो शरीर देखि हानिकारक पदार्थ हटाउँदछ। ताजा फल स्वरूप, सुकेको एक भिटामिन ए, बी, सी, खनिज र आहार फाइबर समावेश गर्दछ। यो सुकाउने प्रक्रिया मात्र फल देखि अतिरिक्त चिस्यान हटाइएको छ।
देखिन्छ र ताजा उत्पादन संग तुलना केही फाइदा: को गैस्ट्रिक एसिड लागि हानिकारक सानो हुन्छ। यो राम्रो छ। शरीर मा पानी ब्यालेन्स केही उल्लंघन सम्बन्धित सुकेको साधारण हानि। तपाईं थप तरल पदार्थ उपभोग गर्न आवश्यक छ। लागि खुशामदभरा फल किनभने यसको ताप मूल्य को सावधानीपूर्वक उपचार गर्नुपर्छ ताजा फल धेरै पटक पोषण मूल्य छ।
साधारण - एक आश्चर्यजनक उपयोगी र स्वादिष्ट ट्रपिकल फल। यो ताजा खाएको गर्न सकिँदैन, सुकेको फारम, विभिन्न व्यञ्जन रूपमा। तर, साधारण लाभ र एउटै विशेषता को हानि लागि कुनै पनि अन्य खाद्य उत्पादन संग रूपमा - प्रयोग गर्न होसियार हुनुपर्छ।
कोको पाउडर किन्न चाहे? लाभ र यो उत्पादन को हानि
डाई महोदया Kandurin: यो छ र के यो खान्छ के?
पनीर "CACIOCAVALLO": मूल को इतिहास, घर मा नुस्खा
टिप्पणी मा पहेंलो भाग कुकिङ देखि सेतो कसरी अलग गर्न
डेली मासु। ब्रन्स्विक ससेज
आइसक्रिम को इतिहास। कसले आइसक्रिम आविष्कार?
«टाटा» HD-120: मिसिन को एक सिंहावलोकन
Heisenberg गरेको अनिश्चितता सिद्धान्त र विज्ञान को विकास मा आफ्नो महत्त्व
किन त्यहाँ छुटकारा प्राप्त गर्न खुट्टा र कसरी एक शिरापरक नेटवर्क छ
पोर्क कलेजो - तपाईंको डेस्क लागि उपयोगी उत्पादन
कारण र उपचार: कम दबाव कम छ।
'म सुत्न सक्दैन ... "
Delonix REGIA - काठ-आगो
Norma पृष्ठभूमि विकिरण: यो के मा निर्भर गर्दछ र यो भन्दा बढी छैन कसरी
खेती को गहन र व्यापक विधि
सबै कुरा Elmira को नाम "राजकुमारी" वा "शासक" हो?